Babalelwa ku-50 abangqongqe nesitolo
UKULUTHWA kwezitolo okuqubuke ngesonto eledlule KwaZulu-Natal naseGauteng kushiye kukhalwa eMzimkhulu njengoba kuthiwa kungqongqiswe inqwaba yabantu abebetapa esitolo sempahla yokwakha nefenisha kwaBhejane. Isithombe esigciniwe: Armand Hough/African News Agency(ANA)
Thokozani Ndlovu | July 18, 2021
UKUTATSHWA kwezimpahla ezitolo okuqubuke ngesonto eledlule KwaZulu-Natal naseGauteng kushiye kukhalwa eMzimkhulu njengoba kuthiwa kungqongqiswe inqwaba yabantu abebetapa esitolo sempahla yokwakha nefenisha kwaBhejane.
Ngokuthola kweSolezwe ngeSonto, asikaziwa isibalo sabantu abashone kulesi sibhicongo kodwa balinganiselwa ku-50 kuya phezulu.
Kuthiwa abashonile bangene esitolo ngoMsombuluko bezotapha impahla yokwakha nefenisha.
Elinye ilungu lomphakathi wakhona eMzimkhulu lithe akuqondakali ukuthi wubani oshise isitolo kunabantu phakathi. Kodwa kusolakala ukuthi abanikazi besitolo bacasulwe yisenzo sabantu abese bezingenele ukuzothatha impahla ngodli.
“Kumanje (izolo) amaphoyisa nabakwaForensic bamatasa batakula izidumbu zabantu abashone besesitolo. Ngenxa yokuthi iningi labo lishe laba wumlotha izidumbu zabo zibuthelwa koplastiki, zifakwa emotweni yezidumbu. Okubuhlungu wukuthi amaphoyisa aseyabaxosha abantu abafika kule ndawo, akhala ngokuthi bayaphazamisa. Kumanje kukhona abahayizayo, okusolakala ukuthi bayazi ukuthi ngamalungu emindeni yabo abezotapa khona. Sekuyisiphithiphithi kanti nabezindaba abekho kule ndawo okuyibona abangakwazi ukungena khona, ukuze bakwazi ukusibikela okwenzeka phakathi. Silokhu sibona kuphuma amaphoyisa nezidumbu zikoplastiki kuphela,” kusho ilungu lomphakathi.
Elinye ilungu lomphakathi lasendaweni lithe imindeni eminingi iqale ukuqaphela emva kwezinsuku ezimbili ukuthi amalungu emindeni yawo kawabuyile.
“Kungaleso sikhathi eqale khona ukusukuma eyobheka ukuthi kwenzekeni kumalungu emindeni yawo. Afike azithela kulesi sibhicongo esenzeke lapha kwaBhejane, kwaqhuma isililo,” lisho kanje.
Umphakathi wasendaweni uthi noma ungahambisani nobekwenziwa ngabantu kodwa ukhathazekile manje ngokushona kwabantu abaningi ngalolu hlobo.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCaptain Nqobile Gwala, uthe ziningi izigameko ezikhona abakwazi ukuphawula ngesigameko ngasinye.
“Sisaqoqa yonke imininingwane ngezigameko ezikhona, bese sizibikela amaphoyisa kuzwelonke. Yiwona azokhipha isitatimende ngazo zonke esezibikiwe,” kusho uCaptain Gwala.
EZINYE zezidumbu zabantu okuthiwa bebeyotapha impahla, ezishe zangqongqa esitolo kwaBhejane eMzimkhulu Isithombe: SITHUNYELWE